Manchester City iyo Arsenal oo ogaaday qiimaha ay Benfica ku doonayso Darwin Nunez | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Manchester City iyo Arsenal oo ogaaday qiimaha ay Benfica ku doonayso Darwin...
Manchester City iyo Arsenal oo ogaaday qiimaha ay Benfica ku doonayso Darwin Nunez
Benfica ayaa lagu soo waramayaa inay €80m (£67.9m) dul dhigtay weeraryahankeeda Darwin Nunez , iyadoo lagu soo waramayo inay xiiseynayaan kooxo badan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Manchester City iyo Arsenal .
22-sano jirkaan ayaa u soo muuqday mid ka mid ah weeraryahanada loogu doonista badan yahay ka hor suuqa kala iibsiga ee soo socda, ka dib markii uu wacdaro ka dhigay kooxda reer Portugal.
Nunez ayaa shabaqa soo taabtay 18 jeer 21 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan 13 gool oo uu ka dhaliyay kulamadii Primeira Liga, isagoo ka caawiyay Eagles inay ku sii jiraan tartanka horyaalka ee ay xafiiltamaan Sporting Lisbon iyo Porto.
Sida laga soo xigtay Fichajes , Benfica ayaa rajeyneysa inay hesho dalabka Nunez sanadka 2022 waxayna fahamsan tahay in kooxaha xiiseynaya aysan u badneyn inay bixiyaan 150 milyan euro (£ 127.3m) ee lagu burburin karo qandaraaskiisa, sidaas darteed waxay hoos u dhigeen qiimahooda 80 milyan euro (£ 67.9m).
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Benfica ay ka go’an tahay inay ceshato weeraryahankeeda, waxayna ku adkeyn doontaa kooxaha xiiseynaya inaysan aqbali doonin dalab kasta oo ka hooseeya qiimeyntiisa.
Nunez, oo weli qandaraaskiisa uu ka harsan yahay wax ka badan seddex sano iyo bar, ayaa sidoo kale lala xiriiriyay kooxaha sida Chelsea , Manchester United , Atletico Madrid , Real Madrid iyo Borussia Dortmund .
Ronaldo oo ku booriyay dhalinyarada inay horumariyaan Labo Arin oo Caafimaadka...
Horudhac: Inter Milan Vs Juventus ee Super Cup-ka Italy Wararka Labada...
R/W Rooble oo guddi u magacaabay kursi muran xooggan uu ka...